बिहान धेरै सुत्दा यस्तो फाईदा ; दि’माग दुई गुणा बढी चल्ने ! – Suchana Hub
बिहान धेरै सुत्दा यस्तो फाईदा ; दि’माग दुई गुणा बढी चल्ने !
काठमाण्डौ । भनिन्छ बिहानले दिनको संकेत देखाउँछ। त्यसैले बिहान राम्रो काम गर्यो भने त्यो दिन निकै उत्तम रहन्छ भनेर शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । दिनभरको काम शुभ बनाउन बिहान केही काम अनिवार्य गर्न जुरुरी रहेको शास्त्रमा उल्लेख छ । बिहान चाँडै उठ्नु राम्रो बानी हो । हालै गरिएको एक सेर्वेक्षणका अनुसार, दिनको शुरुवात जसरी हुन्छ त्यसले हाम्रो पुरै दिनको लागि स्वास्थ्यलाई पनि प्रभावित गर्छ । यदि शुरुवात राम्रो हुन्छ भने पुरै दिन स्फूर्ति बनी रहन्छ। अनि कतिपय मान्छे भने बिहान निकै अबेर उठ्ने गर्दछन । घर बाहिर जानु छैन, कामको चटारो छैन , उठेर गर्नुपर्ने केहि काम छैन किन चाडै सुत्नु ? भन्दै ढिलो उठ्ने गर्दछन ।
कतिपयको त दैनिकी नै बनिसक्यो राति अबेर मध्यरातसम्म बस्ने अनि बिहान निकै ढिलो उठ्ने। अचेल मानिसहरु रातभरी फिल्म हेर्ने गर्छन् र बिहान पनि निकै अबेर उठ्ने गर्दछन् । अ’चेलको व्य’स्त जीवनशैलीका कारण मानिसहरूले राम्ररी निद्रा पु–याउन पनि पाउँदैनन् । प्रत्येक व्यक्तिका लागि कम्तीमा आठ घन्टाको निद्रा आवश्यक हुन्छ भनेर भनिन्छ। निद्रा पूरा नहुँदा विभिन्न किसिमका रोगहरुले सताउने गर्दछन । डि’प्रेसन, टा’इप २ डा’यबिटिज, अ’निद्रा तथा एं’ग्जाइटी जस्ता रो’ग अनिदोको कारण लाग्ने गर्दछन्। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार हरेक दिन नियमित आठ घन्टाबाहेक थप २० मिनेट मात्र सु’त्दा पनि ताजा अनुभव गर्न सकिन्छ । भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ ।
सुतेर २० मिनेट ढिलो उठ्दा ताजा अनुभव त गरिन्छ नै, त्यसका साथै स्वास्थ्यमा पनि अनेकौं किसिमका फाइदा हुन्छ । यसका साथै बिहानपख दुई घन्टा बढी सु’त्दा दिमाग दुईगुणा बढी च’ल्छ । अ’नुसन्धानकर्ता हरूका अनुसार २० मिनेट बढी सु’त्ने मानिस पा’तला हुन्छन् भने बढी सु’त्दा शरीरको क्या’लोरी घट्ने हुँदा तौल ब’ढ्न पाउँदैन ।अलि बढी सुत्दा शरीरमा का’र्बोहाइड्रेट्सको मात्रा घ’ट्छ जसले गर्दा शरीरका को’शिकाहरूले झन् बढी काम गर्छन् । धेरै सु’त्दा प्रत्यक दिन क’म्तीमा ३ सय ८५ क्या’लोरीयुक्त भो’जन गर्न सकिन्छ। नि’यमित समयभन्दा २० मिनेट बढी सु’त्दा ठू’ला मानिसलाई मात्र नभई बच्चाहरूलाई पनि फा’इदा पुग्दछ।
Previous कति थपिए आज संक्रमित ?
Next म्याग्दीमा बढ्दो डेंगु संक्रमण, कुल संख्या २५ पुग्यो